अनि रसाए सबैका आँखा- विविधा - कान्तिपुर समाचार
अनि रसाए सबैका आँखा
मिश्रले जसरी जीवन भोग्नुभयो, त्यसरी नै कहिले शब्दमा त कहिले रंगमा पोख्नुभयो ।
श्रावण २६, २०७५ रमेश खनाल
काठमाडौँ — देशका अत्यन्तै सम्मानित कलाकार मनुजबाबु मिश्रको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यतिखेर ९१ वर्षका प्रसिद्ध आधुनिक मूर्तिकार प्रा. गोविन्दनारायण ज्यापु, ८१ वर्षीय प्रसिद्ध कलाकार हरिप्रसाद शर्मा, मूर्धन्य कलाकार शशीविक्रम शाह, आधुनिक कलाकार गेहेन्द्रमान अमात्य लगायत धेरै कलाकार, साहित्यकार, सञ्चारकर्मी र विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ताहरू तथा मनुजबाबु मिश्रका छोरा रविन्द्र मिश्र (अध्यक्ष विवेकशील पार्टी), रोशन मिश्र, डा. मञ्जु मिश्र (छोरी), माइलो भाइ मोहन मिश्र लगायत आफन्तजनहरू वरिपरि उपस्थित भएका छन् ।
८३ वर्षको उमेरमा उहाँ बित्नुभयो । उहाँ अर्थात मनुजबाबु मिश्र काठमाडौंको बौद्ध महांकालस्थित रामहिटीमा १९९३ भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन जन्मनुभएको थियो । उहाँका पिता स्व. तुलसीसिंह भाषाविद् ज्योतिष, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार हुनुहुन्थ्यो । मनुजबाबु मिश्र पनि पिताझैं बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।
मूलत: उहाँ चित्रकार त्यसपछि साहित्यकार । उहाँले सन् १९६२ देखि १९६८ सम्म पूर्वी पाकिस्तानको तत्कालीन ढाका विश्वविद्यालयबाट कलामा स्नातक पढ्नुभयो । उहाँले प्राय: सधैं श्वैरकाल्पनिक चित्रहरू बनाउनुभयो । उहाँको ‘महेश्वर’ नाम गरेको १२०×९० सेमीको चित्रमा शिवको मुखबाट सर्प निस्केर फणा फुलाएर बसेको छ । शिवको तीन नेत्रमात्र होइन, पाँचौं नेत्र पनि खोलेको छ । अगाडि शिवजी आफैं ताण्डव नृत्य गरिरहेका छन् । शिवका गणहरू लर्को लगाएर हिँंडिरहेका देखिन्छन् । रातो शिव, हरियो परिवेश । शिवको यो भयावह रूप हेर्दै डर लाग्छ ।
त्यस्तै उहाँको अर्काे चित्र मोडर्न ‘गागन्तुवा’ ९०×६० सेमी, बर्थ अफ ब्रह्मा, माता–शिशु लगायत अन्य थुप्रै चित्र पनि भयानकताभित्र परिलक्षित हुन्छन् । आखिर किन यतिविघ्न भयानकता ? के बाल्यकालमा माता–पिताको वियोग, दु:ख, दर्द, हन्डरले भरिएको पीडाजन्य जिन्दगीको प्रतिस्वरूप हो त ? कि वर्तमान समाज, राष्ट्रप्रतिको तिखो व्यंग्य हो ? उहाँले चित्र बनाउनुहुँदा अधिकांश प्रयोग गर्नुहुने आइकनहरू शिवको त्रिशूल, सर्प, माग्ने केटो आदि नै हुन् । र नीलो, हरियो, रातो, पहेँलो रंगसँग बढी खेल्नुहुन्थ्यो । नीलो रंगले दु:ख, क्लेश र पीडाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
उहाँले लियोनार्दाे दा भिन्चीको फ्रान्सको विश्व प्रसिद्ध लुभ्र म्युजियममा भएको संसारकै अति चर्चित चित्र मोनालिसालाई गहना र गुन्यू–चोली लगाइदिएर उनको नेपालीकरण गरेका र आफ्नै पोट्रेट चित्रमा सिंह बनाएर जंगली भाव अभिव्यक्त गरेका लगायतका चित्रहरू धेरै चर्चामा आएका छन् । प्रत्येक मानिसभित्र पशुत्व रूप हुन्छ । कसैले त्यही पशुत्व रूपलाई प्रकट गरेर हत्या, आतंक, बलात्कार गरिरहेका छन् ।
अनि कसैले चित्रमार्फत सकारात्मक सन्देश दिन समाजको आँखा उघार्ने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । आधुनिक युगले आतंकित रहेका मानिसलाई अन्य थुप्रै चित्रमार्फत आफ्नै टाउको छेडेर उडिरहेको रकेट, युद्ध र उडिरहेका मानिस चित्रांकित गरेर देखाउने गर्नुभएको थियो, उहाँले ।
मृत्यु अगाडिको रातसम्म पनि उहाँले चित्र बनाउनुभयो । साँझ ७ बजे सुत्ने अनि मध्यरातिको २ बजे उठेर कित चित्र बनाउने कि निबन्ध लेख्ने उहाँको बानी थियो । मध्यरातको निश्तब्ध वातावरण उहाँलाई असाध्यै मनपथ्र्यो । निश्तब्धताभित्र सिर्जना लुकेको हुन्थ्यो । उहाँले यस्तै वातावरणको सदुपयोग गर्नुभएर ‘विश्व कलाको इतिहास’, चित्रकला शिक्षणविधि, ‘मेरो चित्र मेरो छाया’, अन्तर–तरंग, दुरान्तर, अनुहारका पानाहरू, तरंग तरेली, ‘आर्टिलिएर हर्मिताज’, स्वन्तसम्मेलन (उपन्यास) आदि कला–साहित्य सम्बन्धी पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ ।
उहाँका पुस्तकहरू उच्चकोटीका छन् । खासगरी उहाँको उपन्यास धेरै चर्चा गरिनुपथ्र्याे, तर त्यसै सामसुम भयो । कलाको गहिराइसम्म पुगेर लेख्नुभएको उक्त उपन्यास स्तरीय छ ।
निजात्मक र वस्तुपरक निबन्ध लेखनका हस्ती मानिनुहुने मनुजबाबुका लेखहरू परिस्कृत, अनुभवी र प्रौढ रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो । उहाँको प्रयुक्त सबल अनुभूतिहरूले कलात्मक संस्कार प्राप्त गरेका छन्
र विचारहरूले सौष्ठवता । निबन्धहरू कलात्मक र चित्रमय हुन्छन् ।
उहाँको लेखन विशेषता भनेको सूक्ष्म दृष्टिकोण हो । सानोभन्दा सानो विषयको अन्तरंगभित्र डुबुल्की मार्न उहाँलाई मै हुँ भन्ने कुनै पनि निबन्धकारले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने मेरो अटोट छ । यसै सन्दर्भमा उहाँको निबन्ध ‘अनुहारका पानाहरू’ भित्रको एउटा लेख ‘एउटा झिंगा– युरोपको सहयात्री’लाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि एउटा झिंगो कसरी युरोप सहयात्री भएर गयो, त्यस विषयलाई साह्रै रोचक ढंगबाट पस्किनुभएको छ । लेखनीमा सूक्ष्मता, विषयको गाम्भीर्यता र सरल प्रस्तुतिले मनुजबाबु मिश्रका निबन्धहरू उच्चकोटीका छन् ।
उहाँले जसरी जीवन भोग्नुभयो, त्यसरी नै कहिले शब्दमा त कहिले रंगमा पोख्नुभयो । उहाँ भावुक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– मान्छेको हृदय निचोरियो भने त्यो पानी झुपडीको झोलजस्तो होला, तर एउटा सिंगै देश निचोरियो भने नि † ओ हो † त्यो त महाकाली र मेचीको बाढी नै बग्न पुग्छ । त्यसैले दु:खको रंग बरु बाढीको पानीजस्तो हुनसक्छ ।
जो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुलक्षित भइकन पनि सहज छ र सम्पूर्णमा सिर्जनात्मक हुन्छ । मनुजबाबु मिश्रका सिर्जनाहरूमा तर्कशक्तिका लागि उहाँ बेजोड नै हुनुहुन्छ ।
जसरी साहित्यमा उहाँ बेजोड हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै चित्रकलामा पनि । उहाँले नेपालकै सबभन्दा ठूलो (५५ ×२६० फिट) पोट्रेट बनाएर पनि ख्याति कमाउनुभएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेक (कोरोनेसन) का अवसरमा बनाउनुभएको थियो, उक्त पोट्रेट । गायन, नृन्य, बाद्यवादन बजाउन, नाटकमा खेल्न रुचि राख्ने मनुजबाबुले १२ पटक एकल चित्रकला प्रदर्शनी, २० पटकजति सामूहिक कला प्रदर्शनी र २० वटा सम्मान–पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ ।
अन्त्यमा प्रख्यात कलाकारको पार्थिव शरीरलाई भर्खरै सम्पूर्ण संस्कार सकेर, विद्युत् शवदहनभित्र पठाउँदा सबैका आँखा रसाएका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०७:५०
कता जाँदै छ गीत–संगीत ?
आजका धेरै गीत/संगीत खहरेको पानी बनेर उर्लिएका छन् । सांगीतिक कम्पनीहरू यही खहरेको भेलमा बगिरहेका छन् ।
श्रावण २६, २०७५ राधिका अधिकारी
काठमाडौँ — कुनै एक समय थियो, हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा ‘तीजको रहर आयो बरिलै’ बोलको गीत सबैतिर गुञ्जने गथ्र्यो । यही गीत रेडियोबाट बजेपछि गाउँघरमा तीज नजिकिएको महसुस गर्थे, दिदी–बहिनीहरूले । चलचित्र कन्यादानका लागि तयार पारिएको यो गीत निकै लोकप्रिय पनि बन्यो ।
यो गीतले लामो समय तीजको लहर ल्यायो । आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । तीजका हजारौं गीत तयार पारिएका भए पनि आज पनि तीज आउनासाथ धेरैले यही गीत सम्झन्छन् ।
समयसँगै तीजका धेरै गीत उत्पादन तथा वितरण भए । केही समयअघि बजारमा आएको ‘तीज आयो जाऊ न बाबु दिदी लिनलाई, खुट्टैमा ढोग गरे है भेट्दा भेनालाई’ यो गीत पनि निकै समय नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डियो । प्रजापती पराजुलीको लय तथा शब्द सिर्जनामा प्रजापती पराजुली, पुरुषोत्तम न्यौपाने र हरिदेवी कोइरालाले गाएको यो गीत सुनेर भावुक हुने पनि धेरै छन् । यो गीत सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुन्ने र यसको म्युजिक भिडियो हेर्ने हो भने नेपाली संस्कार र संस्कृतिको ज्युँदो इतिहास बुझ्न सहयोगी हुन्छ ।
‘आमा तिम्रो सरुमै रानी दूधको त्यो भारा, मैले कहिले सरुमै रानी तिरेर सकुँला’ नेपाली लोक गायनमा छुट्टै पहिचान बनाएकी गायिका हरिदेवी कोइरालाले गाएको तीजकै गीत हो । विशेष गरेर तीजले पराई घर गएकी चेली र माइतीलाई मिलन गराउने विशेषता बोकेको हुन्छ । छोरी जब माइतीघर छाडेर पराई घर पुग्छे, बल्ल माइती र आमाको महत्त्व बुझ्छे । यो गीतमार्फत आमाको महत्त्वलाई झल्काइएको छ । हुन त आमाको महत्त्व तीजमा मात्रै बढेर जाने होइन । तथापि त्यो समय छोरीचेलीले तीजका बेलामात्रै गीतका माध्यमबाट आफ्ना मनका भावना र दुखेसो अभिव्यक्त गर्न पाउँथे । यो गीत पनि त्यही समयको वरिपरिको गीत हो ।
‘बाबाले त लिन आथे लौरो टेकी–टेकी, माइत जान हराइहाल्यो आमा बितेदेखि बाबु, साह्रै दुख्यो मन, तीजमा पनि लिन नआई किन गर्छस् फोन ?’ पार्वती जिसी र रामजी पौडेलले गाएको यो गीत सुन्दा कतै पीडा त कतै आनन्दको अर्कै अनुभूति हुन्छ । ‘दिदी–बैनी भेट भएर तीजको दर खाँदिीहुन्, म पनि त आमा भए माइत जाँदिहुम्’, इन्द्र जीसीको लय, शब्द पूर्णकला बीसी र इन्द्र जीसीले गाएको यो गीत उस्तै प्रकृतिको भए पनि फरकपन छ ।
समयले केही कोल्टो फेर्‍यो । यी र यस्ता खालका पीडाका भावबाट चेलीहरू अलि माथि उठेर अधिकारका गीत गाउन थाले । केही समयअघि तीजको छेको पारेर नारी अधिकार र नारी शक्तिका गीत खुब गुञ्जन्थे । अहिले समयले त्यो चरण पनि पार गरेको छ । तीज गीतले मारेको यो फड्कोलाई हेर्ने हो भने हाम्रा चेलीहरू अधिकार सम्पन्न भएछन् भन्ने भान हुन्छ ।
पछिल्लो समयका तीज गीतहरू श्रीमान, श्रीमती तथा प्रेमी–प्रेमिकामा मात्रै सीमित बनेर उत्पादन हुनथालेका छन् । हुन त पछिल्लो पुस्ता आफ्नो एक पुस्ताका लागिमात्रै बाँच्ने बन्दै गएको छ । यसैको असर गीत–संगीतमा देखापरेको हुनसक्छ ।
तीजको मर्म भुलेर हरेक तीजमा श्रीमानको खोजी गर्दै देखापर्छिन्, गायिका कोमल वली । ‘बाबाको दैलामुनि बोट छ है बयर, छोरी धेरै भनेर हेला नगर’ जस्ता मौलिक गीतकी गायिका वली, दण्डपानी पाण्डे लगायतका स्रष्टा कलाकारले १२ वर्षअघि बजारमा ल्याएका ‘पोइल जान पाम् र मैले लान पाम्’ भन्ने गीत/संगीतले नै हो, नेपाली तीज गीतलाई परम्पराभन्दा बाहिरी बाटोमा मोडेको । त्यसयता विस्तारै भड्किँदै गएको तीज गीतको बजार पछिल्लो समय गाईजात्रा जत्तिकै भएका छन् ।
त्यसो त कुरा तीज गीतको मात्रै होइन, हाम्रो पुस्ता यतिबेला नेपाली गीत–संगीत नसुन्ने भएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । यो पुस्तामा ‘दाजुभाइले बिर्संदै गए, दिनदिनै विरानो माइती बरिलै’ जस्ता गीतका स्रोता निकै कम छन् । ‘तीज आए नि पिरलो, नआए नि पिरलो, चोरी खान पल्केको यो ढाडे बिरालो’ जस्ता गीतमा रमाउँदै ‘कि रेखाको चल्छ, कि देखाको चल्छ’ भन्दै उत्ताउला नृत्य हेर्ने दर्शक तथा यस्ता खालका गीत सुन्ने स्रोताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो पुस्तामा भावनात्मक गीत–संगीत सुन्ने श्रोता निकै कम छन् भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
पछिल्लो पुस्ताको रोजाइमा जीवन र समाजका गहिरा अर्थ बोकेका गीत नपर्नुका पछाडि मिडियाको ठूलो हात छ । मिडियाका तरंगहरूमा अधिकांश विदेशी गीत–संगीतले प्रभुत्व जमाउने गरेका छन् । किन प्राथमिकता छन्, विदेशी गीत–संगीतहरूको ? यसको स्पष्ट जवाफ छैन । ‘पिँढीमा बसेर, मेरै बाटो हेरेर’ जस्ता गीत–संगीतले यति पछि पर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? नेपाली गीत–संगीत बज्दै नबजेका पनि हैनन्, तर पछिल्लो समय यस्ता कालजयी गीत कमै बज्छन् ।
आर्थिक हिसाबले पनि राम्रा गीतले स्थान नपाएको तितो यथार्थ हाम्रासामु घामजस्तै छर्लङ्ग छ । हिजोआज पैसामा गीत–संगीत चल्ने गरेका छन् । ‘उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भनेझैं यस्ता खालका गीत–संगीतले श्रोताको मन छुन सक्दैन । प्रचार–प्रसारमा यदि यही अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रो सांगीतिक धरातलमा भावनात्मक गीत–संगीत मासिँदै जानेछ ।
अब हामीले ‘माइती घर तिम्रो होइन, पराई घर जाऊ’ जस्ता गीत–संगीतको अस्तित्व खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । हाम्रो सांगीतिक धरातल कतिको फितलो वा बलियो बनाउने त्यो हाम्रै हातमा छ । हामीले हाम्रा सिर्जनाको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब वहार ल्याउने र जाने गीत–संगीतभन्दा पनि प्रभाव छाडिरहन सक्ने गीत–संगीतको सिर्जना हुनु आवश्यक छ ।
खहरेको पानी जति उर्लिएर बहे पनि आकाश बर्सिउन्जेलको हो । आजका धेरै गीत–संगीत खहरेको पानी बनेर उर्लिएका छन् । सांगीतिक कम्पनीहरू यही खहरेको भेलमा बगिरहेका छन् । उनीहरूलाई थाहै छैन, शान्त सागरको महत्त्व । गीत–संगीतलाई पहुँच र पैसाका आधारमा तौलिन थालिएको छ, हिजोआज । सिर्जनाको मूल्याङ्कन पैसामा हुनु विडम्बना हो । अब हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०७:४७